Pakistàna: Blaogy-o-Fahombiazana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2018 7:40 GMT
Ao anatin'ny natiorako tena tia manao soa ny mpiarabelona, (izay tsy mirazotra fotsiny fa koa mihoatra noho ireo tahàka an-dry George Soros, Warran Buffet ary Bill Gates hoy ny sasany). Tapaka ny hevitro hizara aminareo tsiambaratelo iray mampivarahontsana, nafenin'ny mpibaiko ambony an'ny Cyber Templar nandritra ny taona maro. Amin'ny fanaovana sorona ny aina sy betsaka amin'ireo rantsana sarobidy ankamamiana indrindra amin'ny vatana, ampahatsiahiviko ny tsiambaratelo momba ny ‘Ahoana no hanoratana lahatsoratra mendrika amin'ny blaogy’.
Saingy mialohan'ny hidirako amin'io lohahevitra io, anaovako azafady aloha ny hiresahako mialoha ny tanjon'ity lahatsoratra ity, dia ny hanasongadina ireo lahatsoratra mahaliana avy amin'ireo blaogy pakistaney. Manoratra lahatsoratra iray hafa mamiratra i Fountainhead mampianatra ny filoham-pirenena Bush hiteny “azafady”.
Koa ankehitriny tefaka mankarenin-tsofina no nomen'ireo amerikana mpifidy tao ambadikin'ny Fanjakana, niteraka nofy ratsy ho an'ireo mpanohana anao, mamela ny hoavin'ny maha-filoha anao ho voatantavana tsara mihitsy torohevitra tsara ho anao ny manomboka mianatra miteny hoe “azafady”” mba hanalefahana ny hirifiry mandritra ireo taona roa sisa tavela.
Mba hanoratana lahatsoratra iray mendrika, fepetra mialoha iray no tsy maintsy fenoina. Manàna ianao blaogy, satria izay no tena ilaina mba hanoratana lahatsoratra iray mahomby amin'ny blaogy. Afaka mahazo blaogy iray mora vidy (maimaimpoana) ianao any anatin'ireny fivarotana misy aterineto rehetra ireny. Rehefa manana blaogy, mila manoratra zavatra azo vakiana ianao. Tsy mora io, aleo dia holazaiko anao. Izaho nanandrana nandritra ny taona maro nefa tsy mbola nisy asany tamiko foana, fa ianao no mety hanam-bintana.
Mampiseho fijery mamiratra i Windmill mikasika ny fankatoavana vao haingana ny volavolan-dalàna iray mikasika ny fiarovana an'ireo vehivavy. Miresaka an'io lohahevitra io ihany koa i Sabizak saingy amina fijery tena araka ny tokony ho izy sy marina.
Ny hoe ireo olona nandany azy io dia ireo izay, any anatin'ny fiainany manokana sy ara-ideolojia, tsy miraharaha kely akory momba izay hifirifirin'ny vehivavy, (hanao izay hampaharitra ny fakàn'izy ireo ankeriny, raha ny marina, ao anatin'ireo tontolo anananan'izy ireo dindo sy fitarihana amin'ny endrika ratsy indrindra mety hisy), dia esoeso, saingy ho an'ny zoro ‘mpihatsara ivelan-sihy’ ao anatin'ny foko ao, somary afapo ihany.
Farany, mba hanoratana lahatsoratra iray mahomby amina blaogy, tsy maintsy somary fetsifetsy amin'ny fahafantarana izay lohahevitra hosoratana. Mba hitsapanao ny fahitanao mikasika ny lohahevitra iray sahaza, safidio ny lohahevitra tena mety avy ao anatin'ny lisitr'ireo lohateny goavana nivoaka tsy ela:
1- Nancy Pelosi – Vehivavy voalohany voafidy ho lehiben'ny antenimiera
2- Nanomboka Fantsona Filazambaovao Amin'ny teny Anglisy ny Al Jazeera
3- Armani No Mampiakanjo an'i Katie Holmes Amin'ny Mariziny
Raha ny laharana faha-3 no nalainao ho safidinao mikasika ny fandrafetanao ny blaogy, azo antoka ny fahombiazan'ny lahatsoratrao. Ho anareo izay tsy mahazo antoka mikasika ny maha-mety ny fifantenana izay lohahevitra tsara, manaova sahala amin'izay nataoko tamin'ny lahatsoratro farany indrindra, soraty daholo izay rehetra tonga ao an-dohanao ao.